काठमाडौंभित्र काेराेना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसक्याेः डा बाबुराम मरासिनी | News Polar
काठमाडौंभित्र काेराेना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसक्याेः डा बाबुराम मरासिनी
डा बाबुराम मरासिनी आश्विन २८, २०७७, बुधबार
यो धेरै ठूलो भइसक्यो । यहाँ कार्यालयभित्र, घरभित्र, समुदायमा सबैतिर पसिसक्यो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर र लक्षण सहित संक्रमित हुनेको संख्या उलेख्य मात्रामा बढीरहेको छ । यसमा नागरिकको लापरबाही र सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । वरिष्ठ भाइरोलोजिष्ट डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारको तयारी र योजना नभएको कारण अहिले संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको बताउँदै आउनुभएको छ । अवकास हुनुअघि महामारी तथा सरुवारोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रमुखको रुपमा काम गरिसक्नुभएका डा. मरासिनीका विचार र विश्लेषणहरु अन्तरवार्तामा समेटने प्रयास गरेका छौं । अन्तरवार्तामा डा. मरासिनीले कोरोना नियन्त्रण बाहिर जाँदा राजनैतिक अस्थिरता समेत निम्तिने खतरा तर्फ सबै सचेत हुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । कारोनासँग लड्नका लागि आवश्यक तयारी नै नभएका कारण अहिलेको अवस्था आएको तर्क पनि गर्नुभएको छ । यसै सेरोफेरोमा न्यूज एजेन्सी नेपालले डा. मरासिनीसँग गरेको कुराकानी ।
हामी तेस्रो चरण पार गरेर चौथो चरणमा प्रवेश ग¥यौं जस्तो लाग्छ । काठमाडौंको सन्दर्भमा चौथोमा प्रवेश गरेको जस्तो बुझिन्छ । किनभने यो धेरै ठूलो भइसक्यो । यहाँ कार्यालयभित्र, घरभित्र, समुदायमा सबैतिर पसिसक्यो । त्यो हिसाबले हेर्दा काठमाडौं बाहिरको अझै स्पष्ट छैन, काठमाडौं भित्र चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको हो ।
सुरुका केही समय काठमाडौं बाहिर निकै डरलाग्दो अवस्था थियो । अहिले फेरि काठमाडौंमा त्यो अवस्था देखियो । यो किन भयो ?
स्रोतमै रोक्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो । पहिलो स्रोत त सीमापार हो । हवाईजहाजबाट आउनेलाई त हामीले ठिकठिकै गरेका छौं । हामीले त्यति नरम नियम गरेनौं । तर दक्षिण सीमा तिरबाट आउनेहरुलाई सुरुमा अव्यवहारीक नियम ग¥यौं । नेपाल आउने मान्छे भारत तिरै बस र नेपाल तिरबाट जाने पनि नेपाल तिरै बस भनेर अव्यवहारिक निर्णय ग¥यैं । त्यो अव्यवहारिक निर्णय गर्नु हुँदैनथियो । किनभने दशगजामा १४ दिन क्वारेन्टाइन बसेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार दशगजा क्रस गर्ने वित्तीकै फेरी पारी गएर १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ । त्यो कानुनले मान्दैन । कानून भनेको कानून हो । भारतको दिल्लीमा आएर म १४ दिन बसेको थिए नेपालमा म किन बस्नुप¥यो भन्ने तर्क काम लाग्दैन । त्यो नगर्नुपथ्र्यो । तर पछि आएर सीमापारबाट आउने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड नीति बनाएन । त्यसपछि खुलेआम आउने जाने भयो । त्यसले तराईका जिल्लाहरुमा संक्रमण आयो । दोस्रो फेजमा काठमाडौंमा आयो । यो त सिधासिधा हो । सरुवा रोगको नियम नै त्यही हो । त्यसरी नै आएको हो अरुपनि ।
डेङ्गो पनि त्यसरी नै आएको हो । धेरै सय वर्ष अगाडि मलेरिया त्यसरी आयो । जापनिज इन्सेफलाइटिस पनि पहिला गोरखपुर हुँदै नेपाल भित्रियो । कालाजार भन्ने रोग सुरुमा पटनामा देखिएको हो विस्तारै नेपालतिर आयो । पाँच÷छ वर्षपछि आएको हो । त्यसैले यो रोगको नियम त्यही थियो । त्यसलाई हामीले अलिकति हल्कारुपले लियौं जस्तो लाग्यो । त्यहीनेर रोक्ने प्रयास गरेको भए यस्तो ठूलो नेपालमा प्रकोप (मैले महामारी भन्दीन), कसैकसैले महाव्याधि भन्छन त्यस्तो अवस्था आउँदैन थियो होला ।
तपाई मन्त्रालयमा पोलिसी निर्माणमा बसेर पनि काम गर्नुभयो । यो संक्रमण बढ्दै जाँदा नीतिगत रुपमा सबै अलमल भयो होइन ?
जेल विभाग बनाउने अनि गृह मन्त्रालय आफैले फेरि जेलको काम गर्ने भए त्यो त राम्रो भएन नी । गृहमा पनि जेल विभागलाई नै दौडाउनुप¥यो नी । उसैलाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो चाहिं अलिकति नमिल्दो देखिन्छ । त्यसले पनि समस्या झन जटिल बनाएको हुनसक्ने सम्भावना म देख्छु ।
बाहिरबाट हेर्दा पहिलो घेरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवा विभाग देखिनुपर्ने हामीकोमा सिसिएमसीको कारणले रक्षा मन्त्रालय अगाडि देखियो । कोभिड नियन्त्रणमा । यो आफैमा कत्तिको मिल्दो नमिल्दो हो ?
विश्वमा धेरै लामो समयसम्म लकडाउन गरेका मूलुकमध्ये हामी प¥यौं । फेरि पनि हामीकोमा लकडाउनको बहस सुरु भएको छ । अब लकडाउन आवश्यकता हो या होइन ?
होइन । जुन बेलामा चीनको वुहानमा यो फैलियो त्यो बेलामा चिनियाँहरुलाई थाहा थिएन । यसको इन्कोभेसन पिरियड कति हो थाहा थिएन तर एउटा सम्भावित पिरियड त राखेका थिए । तरपनि यो १४ दिन हो कि होइन भन्नेमा उनिहरु निश्चिन्त थिएनन् । यो कुन भाइरस हो भन्नेमा धेरै उनीहरुमा जानकारी थिएन । यसको परीक्षण कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा त्यहाँ अलिकति समस्या थियो । मानिसहरु व्यापक रुपमा विरामी भइराखेका थिए । ठूलो संख्यामा भएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने नै लकडाउन हो । अव त हामीलाई थाहा छ नी यो रोगको रोकथाम कसरी गर्ने हो भन्ने हामीलाई थाहा छ । यसको उपचार छैन भन्नेपनि थाहा छ । उपचार एकप्रकारले ज्वरो आएको बेलामा ज्वरोको औषधि लिने र खोकि लागेको बेलामा खोकिको औषधि खाने । लाक्षणिक उपचार मात्रै हो भन्ने थाहा छ । यसको खोप छैन भन्नेपनि थाहा छ । यसका लक्षणहरु के के हुन भन्ने पनि थाहा छ । यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्नेपनि थाहा भइसक्यो । त्यसो भएको हुनाले यो लकडाउनको कारण छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संकटले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ । आर्थिक संकट निम्तिएपछि सामाजिक र राजनीतिक संकट निस्किन्छ । यो देखिइसकेको छ । इबोलाले सेरालिओन र लाइबेरियामा के भयो त भन्दा सामाजिक र आर्थिक गिरावट भएका ठूलोठूलो लेखहरु प्रकाशित भएका छन् । त्यो पढ्ने हो भने दर्दनाक छ । मन्त्री भागेको छ त्यहाँ । बहालवाला मन्त्री डाक्टर र नर्सहरुको अवस्था देखेर आफु समेत बस्न नसक्ने भएर भागे, सचिवहरु भागे, सुरक्षाकर्मीहरु भागे, देश यस्तो अवस्थामा पुग्यो की बेहाल भयो । त्यस्तो संकट आइपर्छ । त्यस्तो आइपरेको हुनाले काठमाडौंमा अथवा कुनै सहरहरुमा संक्रमण सर्नुपछाडिको कारण के हो ? एक सय जना भर्ना भएका मान्छेलाई सोध्ने वित्तीकै थाहा हुन्छ । तपाई विगत १४ दिन भित्र कहाँकहाँ जानु भएको थियो । तपाईसँग कोेको मान्छे भेटन आएका थिए । कुनकुन होटेलमा गएर खानुभयो । यो सबै कुरा सोध्नुस न । एकसय जनालाई सोध्ने वित्तीकै थाहा भइहाल्छ । के बाट सरेको रैछ । कर कार्यालय गएको थिए कर तिर्न गएको थिए, वडा कार्यालयमा गएको थिए, मालमोतमा गएको थिए, यस्तै यस्तै कुरा आयो भने त्यहाँबाट सरेको रैछ भन्ने थाहा पायौं हामीले । त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुप¥यो ।
अहिले हेर्दा असफल भएको देखियो । अहिलेको जे जे रणनीतिहरु ल्याएको छ त्यो ठिक देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अव नयाँ रणनीति ल्याउनुप¥यो । कानून पुगेको छैन भने कानून परिवर्तन गर्नुप¥यो । योजना नै रहिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको । हेल्थ सेक्टर इमरजेन्सी रेस्पोन्स प्लान मात्रै बनाएको रहेछ । खास चाहिने हामीलाई के थियो भने हेल्थ सेक्टर प्रिपियरनेस प्लान चाहिन्थ्यो । उहाँहरुले भुकम्पको योजना बनाउनुभयो । चाहिनेथियो हामीलाई सरुवारोग नियन्त्रण्को योजना अथवा रोकथामको योजना । यो सबैचिज विग्रको रहेछ । त्यसो भएको हुनाले यो विभागलाई पनि परिचालन गर्नुप¥यो । विभागलाई अहिले भन्दा धेरै अधिकार दिएर तपाईहरु अगाडि बढ्नुस हामी तपाईहरुलाई के के चाहिन्छ सहयोग गछौं भन्नुप¥यो । अहिलेको रणनीति नबदल्ने हो भने अझ यो भन्दा धेरै भयाभहको स्थिति हुन्छ । अहिलेको रणनीतिहरु बदल्नुप¥यो । योजनाहरु बनाउनु प¥यो । अलिकति हाम्रो तयारी पुगेन । यो तयारीलाई बढाउन तिर लाग्नुप¥यो ।
काठमाडौंमा त कमसेकम घरभाडामा लिन खालि घर छन् । उत्तरी गोरखा, उत्तरी मनाङ, उत्तरी हुम्ला हो भने के गर्नेहो । हामीले कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो विरामीको । त्यसो भएकोले ठूलो संकटको अवस्था आउन सक्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले अलिकति तयारी रोकथाम, काठमाडौंमा खासगरी परीक्षण गर्न पाइन्छ । अझ के भयो भने पीसीआरको पैसा अझै धेरै भयो । सरकारी अस्पतालहरुले २ हजार रुपैयाँ लिएको अन्याय हो । निजीले लिन्छन होला मैले ख्याल गरेको छैन् । ५ देखि ७ सय रुपैयाँमा परीक्षण हुन्छ भने त्यसलाई २ हजार रुपैयाँ लिने नाजायाज हो । सरकारले परल मूल्य मात्रै लिने हो । तपाई साढे सात सय रुपैयाँ गराईदिनुहोस बस चढदा खेरी यहाँ देखि गजुरी जान प¥यो साढे सात सयको पीसीआर टेस्ट देखाउनै पर्ने गरिदिनुस । यहाँबाट हवाईजहाज चढनुप¥यो पीसीआरको टेष्ट देखाउनै पर्ने भन्नुस । बिहेको निम्तोमा जादा समेत पीसीआरको टेष्ट गरेर मात्रै जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यहाँ चाहिं प्रहरी खटाएर पीसीआर टेष्ट ७२ घण्टा यताको रिपोर्ट हेर्ने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो । एउटा पीसीआर गरेपछि १४÷१५ दिन सम्म त्यसको मिति नसकिने बनाउनु प¥यो । यो गर्नेहो भने जुन संक्रमित नभएका लक्षण नभएका मानिसहरुबाट रोग सरिरहने होइन नी अहिले । त्यो नियन्त्रण हुने सम्भावना देखिन्छ ।
अब स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले, सरकारका प्रवक्ताले जहाँ छौं त्यहिं बस्न भन्नुभएको छ । यहिं बस्नलाईपनि गाह्रो छ । चाडपर्वको बेलामा विदेशमा भएका बेलामा दशैं आयो भने मन त्यहाँ विदेशमा हुँदै हुँदैन । अब यहाँ बसेको मान्छे धादिङमा नजा, नौबिसे नजा, काभ्रेको पाँचखाल नजा भनेर यहाँ बस्छ र ? सबैभन्दा बेसी मान्छे यहिं नजिकका जिल्लाका काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, मकवानपुर, चिनवन, रसुवा, नुवाकोटका होलान यहिं नजिकै छ मोटरसाइकल लिन्छन एकैछिनमा पुगेर आउँछन् । पुगेर टिका लगाएर फर्किन्छन् । उहाँहरुलाई भन्ने के हो भने तपाईहरु घरमा जान चाहिं जानुहोस अलग्गै सुत्नुस । एकप्रकारकै क्वारेन्टाइनकै व्यवस्था गरेर घरमै बस्नुस, मास्क लगाएर खुला ठाउँमा, खुला हावामा बसेर टिका लगाउनुस, धेरै मान्छे एकैपटक जम्मा नहुनुस, थोरै मान्छे जम्मा हुनुस, खानपिन अलि परपर बसेर दुई तीन मिटरको दुरी कायम गरेर मात्रै गर्नुस, घरमा बसिराखेका मान्छेहरुसित तपाईहरु घुलमिल नहुनुस । घुलमिल नहुनुभयो भने उहाँहरुलाई तपाईहरुलाई यो रोग लाग्नबाट बचाउनुहुन्छ भनेर अनुरोध गर्न सकिन्छ होला । यति वहाँहरुले पालना गरिदिनुभयो भने काठमाडौं बाहिर प्रकोप निकै कम हुन्छ । एकप्रकारले क्वारेन्टाइनकै हिसाबले बस्नुस भन्दिएपनि पुग्छ ।
# बाबुराम मरासिनी # नेपालमा काेराेना संक्रमण
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७, २१:५१:३९